Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka KGS oo xariga Abuu Mansuur kala hadlay reerkiisa – Kalfadhi
Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka KGS oo xariga Abuu Mansuur kala hadlay reerkiisa
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) Cabdulqaadir Shariif Sheekhunaa Maye, oo uu wehliyo Madaxweynaha Maamulkaas Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-Gareen) ayaa, kulan ay Baydhaba kula qaateen odayaasha iyo waxgaradka beelo ka mid ah qabaa’ilka dega KGS, waxay ugala hadleen tabashooyin ay ka qabaan rabshadihii dhawaan ka dhacay Baydhaba ee la xiriiray Doorashadii Madaxweynaha KGS.
Odayaasha iyo Indheer-garadka beelaha lala kulamay ayaa ku dooday in ay ahayd dhibaato loo geystay in Sh. Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) la xiray, isagoo u ah Musharrax Doorashadii Madaxweynaha KGS. Waxay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada iyo Madaxweynaha KGS-ba ka codsadeen in wadaadkaas dib loogu soo celiyo xuriyaddiisa. Waxay sheegeen in codsigaas ay qoraal iyo afba tiro aan xisaab lahayn ugu gudbiyeen cid kasta oo masuuliyad ka haysa KGS, balse aan wali waxba laga qaban.
Odayaal Reer KGS ah oo dhageysanaya hadalka Madaxweyne Lafta-Geen, oo ay wada lahaayeen kulan
Sidoo kale, waxay soo hadal qaadeen dilka Xildhibaan ka tirsanaa Golaha Wakiillada KGS, oo 14-kii Diseembar ee sanadkii tagay u dhintay rasaas la sheegay in ay ciidan joogay Baydhaba ku kala eryayeen dibadbaxayaal maalinkaas ka mudaharaadayey xariga Abuu Mansuurka. Xildhibaanka, oo lagu magacaabi jiray Cabdishakuur Yacquub Ibraahim (Buulle), ayey sheegeen in ninkii dilay la aqoonsaday, uuna joogo Baydhaba isagoon xirneen, caddaaladna marin, sida ay hadalka u dhigeen.
Eedeymaha iyo tabashooyinka wakiillada qabaa’ilka ay la kulmeen Guddoomiye Maye iyo Madaxweyne Lafat-Gareen waxay inta badan ku wajahnaayeen Madaxweynaha dhawaan la caleema saaray ee Lafta-Gareen, wuxuuse sheegay in dhibaatooyinka lagu shubay dhegihiisa ay dhaceen waqti uu ahaa musharrax, oo uusan xil ummadeed u hayn KGS. “Wax alaaliyo wixii dhib ahaa ee idin gaaray markii ay idin gaarayeen anigu madaxweyne ma ahayn” ayuu yiri Madaxweyne Lafta-Gareen. “Ninkoo musharrax ah oo meel fadhiyey, oo wax rabay ayaan ahaa” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Madaxweyne Lafta-Gareen & Guddoomiye Maye oo ay hor & hareera joogaan odayaal Reer KGS ah oo duceysanaya
Sikastabase, waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay wixii dhib ahaa ee dhacay oo dhan. Sida uu sheegtay, waxa uu ergo isgu jirtay Xildhibaanno iyo dad kale iyo farriimaba dirayey ilaa markii la doortay, si uu u xaliyo tabashooyinka iyo cuqdadda ay qabaan reeraha qaar. “Sheekkhii arrintiisa noqotayaa, dadkii dhintay, dadkii dhaawacmay, wixii yaraa ee kalee la kala tabanaayo ha ahaato waa waxaan u ahay masuul” ayuu yiri Madaxweynaha KGS. “Inaan anigu xaliyo taas iyo wax ka badanba waa tii la ii doortay” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Madaxweynaha KGS Cabdicasiis Lafta-Gareen waxaa, qabaa’iilkii ay la kulmeen isaga iyo Guddoomiyaha Wakiillada KGS, uu ka raaligeliyey dhamaan tabashooyinkii ay odayaasha iyo waxgaradkii kale ka sheegeen kulankaas, waxa uuna carrabka ku adkeeyey ineysan marnaba raali ka ahayn wixii dhacay, oo ay dad badan rumeysan yihiin in sabab uu raad ku leeyahayb ay qaarkood u dhaceen.
Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo doonaya iney haweenku fahmaan ka qeybgalka siyaasadda dalka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Bulshada Rayidka KGS kala hadlay dib-u-hishiisiinta uu wado